Tag: video formats | Martech Zone
Anyị na ndị ahịa nwere echiche zutere taa ma na-ekwurịta ihe metụtara ngwa ngwa ibu ọrụ webụsaịtị. Ọgụ dị na-aga na ịntanetị ugbu a: Ndị ọbịa na-achọ ahụmịhe ọhụụ bara ụba - ọbụlagodi na ngosipụta pixel pọdal dị elu. Nke a na-anya onyonyo buru ibu na mkpebi dị elu nke na-egbochi nha onyonyo. Search engines na-achọ ultra ngwa ngwa peeji nke nwere nnukwu ihe nkwado ederede. Nke a pụtara na bytes na-emefu ederede, ọ bụghị onyonyo.